Anyị enwetala mgbake na mgbọrọgwụ maka LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Iweghachite gam akporo, Gam akporo Root, LG
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ na ndị na- emelitere LG G3 gị na gam akporo 6.0 Marshmallow mediante ndị Polish femụwe na anyị na-eso ebe a na Androidsis naanị ọnwa ole na ole gara aga, taa ị nọ n'udo n'ihi na anyị enweela usoro ntụkwasị obi ma rụọ ọrụ iji nweta wụnye mgbake na mgbọrọgwụ LG G3 mba ụwa ma ọ bụ ụdị D855Ihe a niile na-adịgide adịgide na enweghị mkpa iji kọmputa nkeonwe maka usoro ahụ.
Yabụ ugbu a ịmara, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ikikere Mgbakwunye gam akporo maka LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow ma wụnye ihe gbanwetụrụ Mgbake TWRP, M na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịhapụ nkọwa nke vidiyo vidiyo a ebe m ga-akọwa usoro dị mfe na ntutu na akara ngosi site na ntinye na mgbakwunye na ịkekọrịta faịlụ niile dị mkpa ị ga-achọ iji nweta LG G3 mba nlereanya D855 Root na gam akporo 6.0 Marshmallow.
1 Ihe ndị achọrọ iji buru n'uche ịgbanye LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
2 Faịlụ dị mkpa iji nweta ikikere mgbọrọgwụ na LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
3 Esi mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow ma wụnye TWRP Iweghachite na ya
Ihe ndị achọrọ iji buru n'uche ịgbanye LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
Iji nweta ikike Mgbọrọgwụ na LG G3 na gam akporo 6.0 Marshamallow ma wụnye ọbụna TWRP Iweghachite gbanwere, naanị ị ga-achọ ịchọta ihe ndị a dị mfe:
Valid maka ụdị LG G3 D855 niile na ụdị Latin America dị iche iche.
Naanị maka Mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow nsụgharị, nke ahụ bụ v30b na v30c.
Mee ka USB debugging nyeere site na ntọala ndị nrụpụta.
Mee batrị zuru ezu, ọ bụ ihe amamihe dị na opekata mpe 50% nke ụgwọ ya niile, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ime mgbe ị na-ebu 100 x 100.
Soro usoro m na-egosi na nkuzi vidiyo na leta ahụ, n'otu usoro na-enweghị ịhapụ ọ bụla n'ime ha.
Faịlụ dị mkpa iji nweta ikikere mgbọrọgwụ na LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
Ga-eme budata faịlụ a abịakọrọ na usoro ZIP ma kpughee ya ebe ọ bụla n'ime ebe nchekwa dị n'ime ma ọ bụ n'èzí nke LG G3 nlereanya D855 na ịchọrọ ịwụnye TWRP Iweghachite wee nweta ikikere mgbọrọgwụ ogologo oge.
Ozugbo emebichara anyị ga-enweta faịlụ anọ dị iche iche, faịlụ abụọ na usoro APK yana faịlụ abụọ na ZIP abịakọrọ usoro. Anyị ga-ahapụ ha otu ha dị ma gaa n'ihu na usoro nke Dịrị LG G3 nlereanya D855 na gam akporo 6.0 Marshmallow.
Esi mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow ma wụnye TWRP Iweghachite na ya
Nzọụkwụ ị ga - agbaso, dịka m na - egosi gị na vidiyo nke m na - adụ gị ọdụ ka ị hụ site na mmalite ruo na njedebe, bụ ndị a:
Anyị na-etinye KingRoot APK na anyị na-eme ya iji nweta nwa oge mgbọrọgwụ ikike.
Ozugbo enwetara ikike ikikere nwa oge, na-enweghị ịmalitegharị ọnụ ya anyị na-etinye ngwa nke AutoREC Marshmallow ozugbo anyị mezue ya.
Anyị na-anabata ọkwa na AutoREC chọrọ ikikere SuperUser na anyị na-echere AutoREC Marshmallow iji mee Ndabere nke mgbake mbụ anyị.
Ozugbo Ndabere ndabere, AutoREC Marshmallow n'onwe ya ga-agwa anyị na oyiri abụwo ihe ịga nke ọma na nke ahụ iji gbanye TWRP naanị anyị ga-emetụ gam akporo M logo.
Anyị na-eche ka usoro ihe ọkụkụ TWRP Recovery na-eme ka ọ gwụ ma ozugbo anyị nwetara ọkwa nke usoro ahụ mechara nke ọma, anyị pịa bọtịnụ OK ka njedebe ahụ wee malite ịmalite na TWRP Iweghachite ọhụrụ.
Site na Iweghachite anyị pịa nhọrọ wụnye y anyị na-agbanye zip zip.
Anyị na-emeghe Google Play Store na anyị na-ebudata SuperSU obu ezie na anyi agaghi emeghe ya.
Anyị malitegharia ọzọ na Ọnọdụ IweghachiteMaka ha, anyị gbanyụọ ọdụ ahụ kpamkpam ma malitegharịa ya site na ịpị igodo olu obere ike, mgbe akara LG gosipụtara, anyị na-ahapụ bọtịnụ abụọ maka naanị otu sekọnd ma pịa ha n'otu oge ahụ.
N'ikpeazụ, site na Mgbanwe Agbanwe Agbanwe, anyị na-agaghachi na nhọrọ ahụ wụnye na oge a anyị họrọ abịakọrọ faịlụ na ZIP Ọkpụkpọ na-agba aha Beta Supersu.
Reboot System ugbu a Ugbu a, nwee ụdị LG G3 D855 gị na LG LG 6.0 Marsmallow gọọmentị gbanwere mgbọrọgwụ na ikikere mgbake.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Anyị enwetala mgbake na mgbọrọgwụ maka LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
Nke a bara uru ịga na nsụgharị gara aga (5.0?) Na marshmallow?
Zaghachi Antonio OS
Emeela m ihe ị gosiri, ọ bịara pụta na ejide m na LG Logo oge ọ bụla m gbanyere ya…. kedụ ihe m ga-eme ugbua ??
Zaghachi José Enrique Benitez Barrera
magburu onwe, niile na-enweghị nsogbu, ana m ekele gị
Zaghachi luis fernando morales
Enweela mmelite ahụ na 6.0 ka m wee tinye ihe egwu, nke nwere ike ịdị mma, iji mee ya, (Achọrọ m ime ya mana achọrọ m ka mmadụ mechaa kwenye m).
Zaghachi Mario Davila
Eziokwu abụghị mgbọrọgwụ ahụ
Zaghachi ka wilmar
Ma vidiyo gara aga ị mere banyere ibugo ya na gam akporo 6.0 Ọ dị m mma ma ọ bụrụ na ọ nyeere m aka nke ukwuu… I meela nke ukwuu na m ga-achọ ịkwanye ya….
Ahụghị m mkpa ọ dị Nkpọrọgwụ, 6.0 ezuola, ekele.
Gbanwee na ANDROID 6.0 NA E Nwere MGBE MGBE ekwentị mkpanaka a na-alaghachi dị ka oge 10 na mgbe ahụ ọ na-eguzosi ike, G WHATN CAN KA M GA-EME ???
Zaghachi OMAR DURAN
Ọ B IFR I na M Jikọọ ya na COMPU Ọ KW TOR TO BOBBOR IT Ọ ga-adị mkpa iji gbanye mgbọrọgwụ ọzọ ma ọ bụ gịnị ka m ga-eme ọ bụ ezigbo ihe na-eme ugbu a na ọ malitere ịmalite na ọ naghị akwụsị.
Ndewo ebe ahụ. ọ na-arụkwa ọrụ maka v30d-EUR mbipute?
Josep ọ baara gị uru?
Ehihie ọma. ọ kwesịrị ekwesị maka ụdị D851 T-Movile? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị maara ebe m ga-enweta ya? Achọrọ m ịgbanye D851 m na android 6.0 mbipute D85130D software. Daalụ nke ukwuu.
Zaghachi Mauricio Forero
Enwere m nsogbu na enweghị m ike ịchọta azịza maka, agbasoro m usoro nke nkuzi 100% rue mgbe m ga-amalitegharị ekwentị iji banye na mgbake ahụ, ọ na-apụta na mgbe ịmalitegharị ya na nke mbụ ya mgbe ị na-etinye mgbake, ee Nke ahụ na-arụ ọrụ, ọ bụkwa mgbe m gbanye zip zip, mana mgbe ị ga-agbanyụ ma tinye olu (-) ekwentị na-abanye na mgbake ngwaahịa na TRPW
Ihe nkiri HD App dijo
Daalụ maka ịkekọrịta nkuzi a.
Zaghachi na Movie HD App
Katuunu Hd ngwa dijo
AutoREC Marshmallow n'onwe ya ga-agwa anyị na akwụkwọ ahụ nwere ihe ịga nke ọma
Zaghachi na Katuunu Hd Apk
Achọrọ njikọ faịlụ dị mkpa
Ụjọ Guuii dijo
Ọ na-arụ ọrụ zuru oke, daalụ nke ukwuu
Zaghachi Guii Dread
Roi Álvarez Lake dijo
Ozugbo usoro a mechara, ị nwere ike iwepụ eze mgbọrọgwụ, sachapụ ma gbanye onwe ya?
Zaghachi Roi Álvarez Lago
Nnọọ! Vidio ahụ nyeere m aka !! Daalụ!! ọ dị ngwa, dị mfe, ma dịkwa mfe nghọta! ihe m chọrọ ịma, ị nwere ike iwepụ eze mgbọrọgwụ, ọcha na autorec?
Ndewo, daalụ maka obere nkuzi a, ngwangwa, ruo n’isi ma dị irè.
N'aka nke ọzọ, ndị nke na-arịọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike iwepu dị ọcha na autorec na ndị ọzọ ... Ana m agwa gị na EE, ị na-ehichapụ ha, emeela m na ọ nweghị ihe na-eme.
Maka ndị gị nke mebiri emebi, mebie, gbaghaa, belata, ... ọnụ na mbọ ahụ, enwere ihe ngwọta, ọ na-arụkwa ọrụ maka onye ọ bụla na-akwa ụta maka mgbake gbanwere ma gbanye mgbanaka ahụ:
- Budata femụwe kachasị emelitere site na imei ... dịka ọmụmaatụ ibe a)
- Budata ndị ọkwọ ụgbọala LG ma wụnye ha.
- Budata LG FlashTool mmemme.
- N'ikpeazụ, gbasoro nkuzi ọ bụla nke ọtụtụ puku na net banyere "na-egbu maramara KDZ na LG FlashTool" dị ka nke onye ọrụ ibe m, dịka ọmụmaatụ https://www.youtube.com/watch?v=fGeefuXR9w4
Njikere, ị nwere "selular" dị ka nke ọhụrụ.
Nye onye okike nke post a, na-eme ka ụlọ ọrụ na-ewute obi ụtọ !!
Onye iberibe dijo
Ee ọ na-arụ ọrụ, echere m na m kpaliri faịlụ "beta" karịrị ma karịa faịlụ "nwere ike ịhapụ". Ihe ihe adighi ... (Ana m agbanye onwe m). Mgbaghara
Mgbe m wedat supersu ma gbanyụọ ịbanye mgbake ọzọ, ọ naghị abanye naanị nrụpụta nrụpụta pụtara
Ga-enweta menu ụlọ nrụpụta ihe, ị ga - asị ee ọ bụrụ na ị ga - ehichapụ ihe niile wee malite ịgbake
Elvis omume dijo
Agbasoro m usoro niile, na ihe niile ziri ezi, enweghị m njehie ọ bụla
Zaghachi Elvis Morales
wunye fulmics 6.9 na LG d851 ma o doo m anya na imei. * # 06 # MEID ???? Amaghị m otu esi edozi ya. Olileanya na Francisco Ruiz
Zaghachi Luis Panama
Enyi, otu ihe ahụ mere m na htc, enweghị atụmanya, IMEII bụ data ekenye gị nke onye ọrụ ụlọ ọrụ gị, ịmaatụ Sprint, verizon. akụkụ
egbu egbu francis fuentes garcia dijo
ndewo a ajụjụ na-arụ ọrụ maka lg g3 d850 si na & t na 6.0?
Zaghachi ka onye na-egbu francis fuentes garcia
Ihe niile ga - arụ ọrụ mana enwere nsogbu, eze ahụ na - apụta na enweghị atụmatụ dịnụ ma m nwalere na ngwaọrụ ndị ọzọ ma ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla, enyi ị maara ụzọ ọzọ ị ga - esi gbanye n'ihi na enweghị na ọ gaghị ekwe omume mee usoro ndị ọzọ, daalụ
Na-eje ozi maka v30d mbipute
Na-eje ozi maka v30d EUR mbipute
Gwa m na ọ na-arụ ọrụ maka lg g3 d851
Zaghachi Erick Madrid
Ezigbo, agbasoro m usoro nke akwụkwọ ozi na mkpanaka nke akwụkwọ nzọ ụkwụ. 4h Anọ m na-alụ ọgụ na mkpanaka ma a ka nwere akara ngosi ọbara LG, m gbalịrị ime nrụpụta siri ike nke twrp ma gbalịa ịwụnye KDZ mbụ ọ bụla na ọnọdụ melite ngwa ngwa na ngwa ọrụ ọkụ. Ekwentị m bụ v30c. Ka anyị gaa na ndakọrịta dịka nkwupụta gị abụghị. Ugbu a, anyị ga-ahụ otu anyị si edozi ya. Daalụ nke ukwuu.
Enyi njikọ ahụ anaghị arụ ọrụ.
Francisco, ụtụtụ ọma, enweghị faịlụ iji gbanye mgbọrọgwụ ma tinye m Twrp, kedu ka m ga - esi budata ha?
Samsung Galaxy Note 6 nwere ike ịmalite na July na gam akporo N
Mepụta otutu ịnọ otu ngwa na ekwentị gị na App Cloner